Basa Kunze | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rubric: Basa kune dzimwe nyika
Ndingaenda sei kushanda muUN?
Chii chinonzi basa rangu rekuongorora
Ndeupi rudzi rwebasa iri muongorori? Pano, pamusoro, iwe wakanyora zvinhu zvose zvakadzama. Ini ndichati mumutauro unonyanya kushandiswa: unyanzvi ndiye muongorori pasi pevhu, ndiye sapper, anokanganisa pamwero mukuru kamwe, shure kwaizvozvo anogona kusiya ...
Zdrastvujte! Pane munhu angaratidza nzvimbo dze US kuwana basa muU.S., kana kuti ungawana sei mushandi?
Zdrastvujte! Pane munhu angaratidza nzvimbo dze US kuwana basa muU.S., kana kuti ungawana sei mushandi? uye iwe hauna matambudziko neAmerica mvumo yekugara kana iwe unokosha kwazvo ...
Mubhadharo wemagetsi. Ndiani achati api magetsi emagetsi kuMoscow uye muSt. Petersburg?
Mubhadharo wemagetsi. Ndiani achati api magetsi emagetsi kuMoscow uye muSt. Petersburg? Zviri nani kuumba IP uye kushanda iwe pachako. Achabuda dzimwe nguva zvakare. MuKazan, an electrician kwandiri wiring ...
Shanda mumigodhi nemigodhi. prom-ti muAUSTRALIA cannington-ag
Shanda mumigodhi nemigodhi. prom-ti muAUSTRALIA cannington-ag Chimwe chinhu ivo vose vanopa mhinduro yakanaka, ivo vakapindurawo kuti ndakauya, zvinoshamisa zvikuru zvose zvinotumira kwandiri uye ...
ndiani akashanda muNorway pamafuta uye gasiti mapurisa? zvakakosha here kuenda kune dzimwe nyika kana kuti inopisa? ndiudze!
ndiani akashanda muNorway pamafuta uye gasiti mapurisa? zvakakosha here kuenda kune dzimwe nyika kana kuti inopisa? ndiudze! Basa rakadaro. Bhadhara zvakanaka! Asi iwe, shamwari, haungasviki ikoko! Ne: 1) ...
Ndiudze iwe unogona kuwana sei pane mapurisa eRussia, kana ichibva kuUkraine
Ndiudze kuti iwe unogona sei kuwana basa kumafurati emafuta muRussia, kana ichibva kuUkraine.Hungu, kunyange kubva kuChina, kontrakiti muKharkov uye vperd, kana iyo mamiriro okunze inogona kumira. come in ...
Ndiani akaenda kundoshanda muFinland kunotora strawberries ??
Ndiani akaenda kundoshanda muFinland kunotora strawberries ?? Nguva yacho inotanga pakupera kwaJune uye kutanga kwaJuly (zvichienderana nemamiriro ekunze), uye inopera mumazuva ekupedzisira aJuly. Akave akakurumbira nokuda kwebasa rake ...
nzira yekuenda kuAmerica kurarama nekushanda?
nzira yekuenda kuAmerica kurarama nekushanda? kuti utange kukunda kadhi rakagadzirwa muRussia uye uite visa! Kana iwe uine kadhi kadiki, iwe unogona kusununguka kurarama, kushanda, ...
Ndiudze kuti ndingaenda sei kumigodhi yegoridhe yeRussian Federation yekushanda.Asi ndongotarisa nhamba neateri kana masayiti. Ini ndiri kuUkraine.
Ndiudze kuti ndingaenda sei kumigodhi yegoridhe yeRussian Federation yekushanda.Asi ndongotarisa nhamba neateri kana masayiti. Ini ndiri kuUkraine. Zvinotora magwaro akawanda, kusanganisira chibvumirano chebasa ...
ndiani achataura nzvimbo chaiyo yebasa muCanada?
ndiani achataura nzvimbo chaiyo yebasa muCanada? Tinobatsira pakutsvaga basa mumhuri dzeCanada kune vakadzi vane dzidzo yezvidzidzo kana ruzivo rwebasa mumhuri dzine mazamu nemafambisi. Pakutanga ...
Kushumira nechibvumirano muSiriya zvinogoneka here?
Kushumira nechibvumirano muSiriya zvinogoneka here? Ndinoda kuenda ikoko ... nanniki haasi varwi uye havana kodzero yehutano hwemusungwa wehondo. Izvi zvinoreva kuti izvo zvinotyisa zvinokwevera kune mhosva ...
Inokurudzira kupi kuenda kunze kune imwe nyika kushanda kune dzimwe nyika? Ndekupi mubhadharo kupfuura kwose kwose?
Inokurudzira kupi kuenda kunze kune imwe nyika kushanda kune dzimwe nyika? Ndekupi mubhadharo kupfuura kwose kwose? Izvi hazviitiki ... Kuverengwa kwemvumo yebasa muUnited States inodhura madhora matatu kusvika ku5 000 madhora, muBritain - ...
Mibvunzo ye67 mu database yakagadzirwa mu 0,580 masekondi.